MAHAFINARITRA MANDRAKARIVA amin'ny SOLARIVAVY Solar Solve Marine
Aoka ho maitso amin'ny Solar Solve Marine
HERINASA VONJEO - VONJY VOLA
SOLASOLV-UK ™ - MOMBA NY MASTERS
MANDEHA HATRAMIN'NY SAFIDY MAHARITRA
Miaraka amin'ny SAVINGS miaraka amin'ny GHG EMISSIONS
Ambonin'ny fanampiny fanampiny COST SAVING
AMIN'NY SCREENS SOLASOLV-UK ™ ampiasaina amin'ny toerana rehetra misy alim-baravarana, azo antoka ny famonosana manan-danja, vakiana ..…
Isaky ny mandehandeha na mitandro ny tontolo iainana mampiasa solosaina SOLASOLV-UK ™, dia hamonjy vola ianao ary hampivoatra ny dingan'ny kabôlôniana amin'ny alàlan'ny fampihenana ny famoahana ny GreenHouse Gas (GHG).
Ny habetsaharanao dia miankina amin'ny isa maromaro, anisan'izany ny 6 main-:
1. Ny haben'ny efitrano fanaraha-maso, birao, trano misy kodiarana na karazana faritra arovana
2. Nandeha sambo ny zotra (ho an'ny sambo an-dranomasina)
3. Toetran'ny toetr'andro / toetr'andro
4. Ao anaty mari-pana amin'ny rivotra
5. Vidin'ny herinaratra
6. Ny sarimihetsika alokaloka SOLASOLV-UK ™ voafantina; Silver & Gold no mpamonjy herinaratra mahomby indrindra
Ny fikarohana dia natao mba hamaritana ny tahiry tena izy azo antenaina rehefa ampiasaina amin'ny sambo an-dranomasina ny efijery SOLASOLV-UK ™ nefa mitovy amin'ny toerana mijirika misy varavarankely toy ny tilikambo VTS, karazana efitrano fidiovana ary birao hafa. . Ny fitsitsiana angovo dia hiteraka fihenan'ny famoahana GHG ary koa valisoa ara-bola amin'ny fitsitsiana ny sandany. Ny taham-bidy dia hampihemotra ny fivoaran'ny ara-bola voalohany amin'ny fametrahana ny efijery SOLASOLV-UK ™.
Ny famaritana ny tahiry amin'ny dolara ho an'ny mpanjifa na sambo iray dia tsy azo atao, raha tsy hoe ny lalam-barotra marina, ny toetr'andro, ny andro sns sns dia fantatra mazava tsara. Na izany aza, avy amin'ny valin'ny tatitra dia afaka manonona tarehimarika isan-jaton'ny fitsinjaram-pahefana hipetrahan'ny mpanjifa ny fehiny sy ny heviny manokana.
Rehefa mandinika ny safidin'ny karazana sarimihetsika alokaloka SOLASOLV-UK ™, raha tsy zava-dehibe ny hatsarana amin'ny lokon'ny sarimihetsika dia ny fihenan'ny jiro sy ny fandavana ny hafanana no antony lehibe 2. Ny horonantsary mahomby indrindra amin'ny fampihenana ny famirapiratana dia ny volamena sy ny volafotsy.
Raha ny fandavana ny hafanana dia mety hisy fahasamihafana lehibe eo amin'ny lokon'ny sarimihetsika. Manamarina izany ny angona avy amin'ny tatitra. Ohatra - Ferry iray misy Wheelhouse Large, manomboka amin'ny Cadiz mankany Tenerife (Atlantika Ocean Region) miaraka amin'ny efijery sarimihetsika alokaloka SOLASOLV-UK ™ Bronze ampiasaina dia hamonjy 55% ny herinaratra. Raha sarimihetsika alokaloka volafotsy ny efijery, ny fitsinjaram-pahefana dia 73%, na 1.3 imbetsaka mahery no voavonjy. Nandritra ny andrana rehetra, ny sarimihetsika Silver dia ny mpitarika mamonjy herinaratra.
Ny vokatra SOLASOLV-UK ™ dia noforonina tany am-boalohany hamahana ny olan'ny masoandro natsangan'ny masoandro namakivaky ny varavarankelin'ny tetezana fitetezana ny sambo ary nandritra izay 30 taona lasa izay, nanomboka ny taona 1988 dia nanamboatra sy nanome efijery 176,275 mahery izahay tamin'ny sambo 18,250 sy toerana hafa manerantany , ao amin'ny Firenena 111 amin'ireo kontinanta fito. Ny vokatra marika Brand Approved izay namboarina dia ampiasaina amin'ny karazana sambo rehetra izay misy tranofiara na tetezana fitetezana, ao anatin'izany ireo sambo fitondra-dranomasina maherin'ny 15 firenena.
Afaka mandà hatramin'ny 93% ny famirapiratra, 87% ny hafanana ary ny 99% ny hazavanao avy amin'ny masoandro, ny sunscreens roller-tsika dia tsy manome antoka fa hiasa ao anaty tontolo tsara sy azo antoka kokoa ny mpiasa fa mandray anjara amin'ny fanatsarana ny dian-tongotranao amin'ny alàlan'ny ahena fanjifana herinaratra fanamafisam-peo miaraka amin'ny tahiry mifandraika amin'ny fandaniana mihodina. Izy ireo koa dia mandaitra amin'ny karazana varavarankely, indrindra ny toerana iasan'ny olona ary ilàny jerena eo am-baravarankely ho isan'ny fizotrany, ohatra, ny Vessel Traffic Services dia fiasa lehibe iray izay mety hampahory ary nanome ny manam-pahefana eto amin'ny seranana izahay. manampy amin'ny fahasalamana sy fiarovana ny mpandraharaha.
Solar Solve UK dia nahazo ny loka 20 ho an'ny fividianana entana sy tombontsoa azo avy amin'ny varotra mifototra amin'ny fikarakarana mpanjifa.
Ireto ambany ireto ny safidy tsindraindray mety ho tahirim-bola amin'ny rivotra fantsonan'ny rivotra ho an'ny karazana sambo isan-karazany amin'ny zotra hipothetika sy ny efijery SOLASOLV-UK ™ ampiasaina amin'ny fitetezana tetezana amin'ny tetezana, miaraka amin'ny fitsitsiana angovo.
Ferry iray misy trano misy kodiarana lehibe, handeha ho any Hull mankany Amsterdam (faritra avaratry ny Ranomasina Avaratra) miaraka amin'ny efijery sarimihetsika Silver shade SOLASOLV-UK ™ Silver ampiasaina = 81% mamonjy herinaratra.
Ferry misy tranofiara kely, mandeha eo Napoli mankany Cagliari (Faritra Mediteraneana Mediterane) miaraka amin'ny efijery sarimihetsika MAILASOLV-UK ™ Grey ampiasaina = 34% mamonjy herinaratra.
Sambo fitaterana entana miaraka amin'ny Medium Wheelhouse, miainga avy any Bellmullet mankany St. Johns (Atlantika Ranomasimbe Atlantika) miaraka amin'ny efijery sarimihetsika Gold shade SOLASOLV-UK ™ Gold ampiasaina = 51% mamonjy herinaratra.
Ferry misy tranobe misy kodiarana midadasika, miainga avy any Cadiz mankany Tenerife (Faritra Atlantika Atlantika) miaraka amin'ny efijery sarimihetsika Silver shade SOLASOLV-UK ™ Silver ampiasaina = 73% mamonjy herinaratra.
Betsaka ny angona lalina azo jerena ao amin'ny tatitry ny Solar Solve Marine UK izay azo alefa amin'ny alàlan'ny telefaona +44 191 454 8595 tamin'ny voalohany. Ny atin'ity tatitra ity sy ny fehiny no manohana ny fanambarana voalaza eto amin'ity pejy ity.
Sary - Ivon-toeran'ny injeniera an-dranomasina, siansa ary teknolojia
Loka ho an'ny EXCELLENCE IN INDUSTRY MARINA
SOLAR SOLVE LTD's INVENTORY OF FIRE MATERIALS (IHM)
(antsoina hoe Green Passport taloha)
Izany dia manamarina fa ny vokatra novokarin'ny Solar Solve Ltd TSY misy fitaovana voafetra na tsy dia mifantoka amin'ny fitaovana mampidi-doza ary mifanaraka amin'ny EU rehetra sy ny fepetra hafa momba ny tontolo iainana / fepetra.
Fantatry ny rehetra tsara ny fanamafisana apetraka amin'ny fiezahana hamorona tontolo tsaratsara kokoa ho an'ny taranaka ho avy amin'ny alàlan'ny fihetsika ankehitriny hampihenana ny gazy gazy karbonika miditra amin'ny atmosfera. Isika rehetra dia manao izay betsaka indrindra vitantsika mba hamonjy an'izao tontolo izao amin'ny fanimbana tena.
ANKEHITRINY HO AN'IZAO TONTOLO IREO SHIPOWNER
Fast Cats, Fandatsaham-borona, solika na mpiady solika
Tankers, Tugs, Containers or Brighters
Boîte de sécurité, Boîte de patrimois, Fishers ou carriers
Sambo na sambo; SOLASOLV tsy misy sakana
Na inona na inona ilay sambo, na aiza na aiza misy azy
Gaoanna dia mitebiteby izay avy any an-danitra
Ny olana ateraky ny masoandro na ny ranomandry
Azo atao ve ny mametraka mora amin'ny trice
Ny ekipa dia mila fiarovana amin'ny fipoahan'ny masoandro sy ny hafanana
SOLASAFE mamaha ny olana ary tena madio
Rehefa ampiasaina eo amin'ny tetezana dia ho afa-po ny ekipa
Hanatsara ny tontolo iainany ireo sary
Tsy ho an'ny fiarovana na ny tahiry amin'ny vola
Misy antony hafa tokony hanomezanao azy ireo bash
Fa izao tontolo izao dia lehibe tokoa
Toa maitso ny tompon'ny sambo